Isithungathwa ngabaphenyi abazimele ingane eyaduka ekuqaleni konyaka e-KZN | News24
Isithungathwa ngabaphenyi abazimele ingane eyaduka ekuqaleni konyaka e-KZN
Durban - Ingane yasogwini oluseningizimu yeKwaZulu-Natal, osekuphele izinsuku ezingu-26 yaduka, isithungathwa ngabaphenyi abazimele.
Okhulumela amaphoyisa uThembeka Mbhele uthe uSphesihle Dlamini oneminyaka emithathu ubudala waduka ngesikhathi kuqhubeka inkonzo endaweni yaseMandawe, ewadini laseSilengeni ngosuku olwanduleka olukaNcibijane.
Wayegqoke ingubo e-pink ngosuku aduka ngalo.
OLUNYE UDABA:Umndeni usathungatha ingane eyalahleka enkonzweni ngolwandulela olukaNcibijane
"Ingane okwabikwa ukuthi idukile eMandawe eSilengeni namanje ayikatholakali. Amaphoyisa asayifuna. Siyacela kumalungu omphakathi noma ngabe ngubani onolwazi lokuthi le ngane ikuphi ukuba axhumane namaphoyisa aseMzinto noma ashayele iCrime Stop ku-08600 10111," esho.
Ubaba wengane, uMxolisi Ngwane, uthe umndeni unethemba lokuthi ingane izotholakala.
"Sekunomphenyi ozimele naye ofuna ingane kanti sesibonene naye. USphesihle waduka kusukela ekuqaleni konyaka. Kunzima emndenini kodwa sinethemba ngenxa yokwesekwa nemithandazo esiyitholayo," esho.
Kuvele ukuthi lo baba usehlanganise umehlokaboni ka-R30 000 konolwazi ngendodakazi yakhe.